Falanqeyn : Abaarta iyo sida looga gaashaaman karo (dhegayso) – Radio Daljir
Maarso 17, 2019 12:14 g 0
Dowladda Puntland todobaadyo ka hor waxa y sheegtay in deegaano kamid ah Puntland ay ka jirto abaar baahsan iyo biyo la,aan saameen ku yeelatay dadka iyo duunyada.
Hadaba sidee looga looga gaashaaman karaa Abaarta soo noq noqotay ? maxaa la gudboon shacabka iyo dowladda ? xaaluufka deegaanka saameen ma ku leeyahay abaarta soo noq noqonaysa? sidee ayay uga gaashaaman jireen dadkii hore ee reer miga ahaa?
Su,aalahaas iyo kuwo kale waxaan hor dhignay Barafasoor Xareed oo bare ka ah Jaamacada Bariga Afrika.